Beesha_Sacad_Muuse Maxay kaleefidoonta Madaxwaynaha #Jeegaantu Dooratay ee Muuse Biixi Cabdi - somalilandlivemedia
Beesha_Sacad_Muuse Maxay kaleefidoonta Madaxwaynaha #Jeegaantu Dooratay ee Muuse Biixi Cabdi
13:51 2. December 2017
#Beesha_Sacad_Muuse Maxay kaleefidoonta Madaxwaynaha #Jeegaantu Dooratay ee Muuse Biixi Cabdo
Waana ta keentay inay hal-daba-la ugu codeeyeen doorashada dhawaanta dhacday. 2003 wakhtigii ay xukuumadii Daahir Riyaale Kaahin culayska badan kala kulmaysay ayuu Sh. Muuse Jaamac Goodaad AHN yidhi” waar Isaaqow ileyn markii aad qaaxo joogteen ayaad dawladnnimada qaybsateen oo aad kursiga madaxtinimo beel beel ugu qori tuurateen, dee markaa show wuxuu Daahir Riyaale ku soo beegmay iyada oo ay kursiga doorkan u leeyihiin Habar Jeclo. Ileyn waad aragtaan culayska meesha yaalle, nimankii Habar jeclo waa kuwan hadhsan waayey. Shirkii Boorama haddii aad noo sheegi lahaydeen si uun baanu ula tacaali lahayne, loomamaydaan sheegin. Markaa saaxiibayaal naga raali ahaada si deg-deg ah ayaanu idiinka soo kacaynaaye”
Xigash:- Cali Cabdi Coomay
Suxufi, qoraa ah. Kasoo jeedha Beesha Sacad Muuse
Guddida Guurtida Laanta Toronto Ee Xisbiga Kulmiye oo Cawda u Jaray Xubno Khilaaf Huriyaal ah, Doortayna Hoggaan iyo Guddi Fulineed
Newer PostFadeexad weyn: Dhacdooyin Muujinaya Hanti-Boob Iyo Musuq-Maasuqii Ugu Cuslaa Abid Uu Saddexdii Sanno Ee U Dambeeyay Dalka Ka Dhacay Iyo Shirkado Ganacsi Oo La Ogaaday
Older Post MADAXWEYNAHA LA DOORTAY MUUSE BIIXI OO LA SHEEGAY INUU GO’AANSADAY INUU XIL-WASIIRNIMO U MAGACAABO SEEDIGII OO XAASKIISA LA DHALATAY..